सुन्दरताको लागि स्वस्थ शरीर, सफा मन « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
सुन्दरताको लागि स्वस्थ शरीर, सफा मन
२०७१, १२ चैत्र बिहीबार ०२:४२ मा प्रकाशित
नामः गरिमा पन्त उमेरः २७ वर्ष पेशाः कलाकारिता उचाईः ५ फिट ५ इन्च शारीरिक तौलः४९ के.जी.
राम्रो अनुहार, सुडोल शरीर, अभिनय कलाले मात्र अब्बल कलाकार बन्न सकिदैन । शरीर र दिमाग दुवैलाई उत्तिकै फिट राख्नुपर्छ सफल अभिनयका लागि । उहिले उहिले जस्तो दुई चार ओटा डाइलग पेल्दैमा कलाकार बनेर टिक्न गाह्रो छ । यो सबै यथार्थबीच नायिक गरिमा पन्त आफूलाई सबैतिरबाट अपडेट र फिटनेश राख्न सफल हनुभएको छ ।
नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी स्थापित नायिका गरिमा पन्तको चर्चा हिजोआज थप बढेको छ । विशेषगरी सार्क फिल्म फेस्टीबलमा नेपालको प्रतिनिधित्व गदै चलचित्र झोलाबाट उत्कृष्ट अभिनेत्रीको पुरस्कार हात पार्न सफल भएपछि उहाँका चर्चा बढेको हो । सतिप्रथामा आधारित चलचित्र झोलाले सार्क राष्ट्रहरुबीचनै उत्कृष्ट चलचित्रकी महिला पात्रमा सम्मानित भएसँगै गरिमा पन्तलाई नेपाल सरकार लगायत बिभिन्न संस्थाहरुले सम्मान गरेका छन । बिगत नौ बर्षदेखि नेपाली कलाकारितामा रमाइरहेकी कलाकार गरिमा पन्त आफ्नो शारीरिक सुन्तरता कायम राख्नमा कतिको सचेत हुनुहुन्छत ? पढौं, उहाँकै शव्दमा
मेरो पुख्र्यौली घर तनहुँ हो । हाल काठमाडौको सामाखुसीमा बन्दै आएकी छु । नेपाली कलाकारितामा लागेको ९ भयो । कलाकारिताबाहेक अन्य केही पेशा छैन । कलाकारितासँगसँगै ग्रामिण विकास बिषयमा स्नातोकोत्तर गरिरहेकी छु । हालसम्म १९ वटा चलचित्रमा अभिनय गरिसकेकी छु । हाल बी.पी. कोइरालाको तिनघुम्ती भन्ने उपन्यासमा आधारित सिनेमाको तयारीमा छु ।
म आफनो स्वास्थ्यको निकै ख्याल गर्छु । स्वास्थ्यप्रति सतर्कता अपनाउने गरेकी छु । स्वास्थ्य नै मेरो धन हो । बाहिरी सुन्दरता मात्र भएर हुँदैन भित्री सुन्दरता अति आवश्यक हुन्छ । यो स्वास्थ्यले नै दिन्छ । यसका लागि आफू स्वस्थ रहनुपर्छ । कलाकारिताको क्षेत्रमा त यो झनै आवश्यक छ । शरीर स्वस्थ राख्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण खानपान नै हो । म सन्तुलित खानपानमा विशेष ध्यान राख्छु ।
आप्नो स्वास्थ्यका लागि मैले विगत ९ वर्षदेखि योगा गरिरहेकी छु र यसले मलाइ फिट रहन सहयोग गरेको छ । डाइटिग गरेर बस्नु भनेको एकदमै ठुलो मानसिक रोग हो भन्ने मलाइ लाग्दछ । म डायटिङ गर्दिन । एकदमै दुब्लो र बढि डाइट गरेर स्वस्थ्य हुन सकिदैन । समयमा खाना खानुपर्दछ । नपच्नेगरी धेरै खानहुँदैन । म शरीरलाई आवश्यक पौष्टिक तत्व मिल्ने खालका खानेकुरा खान्छु । सन्तुलित खानाले शरीर स्वस्थ राख्छ । त्यसैले म खाएरै शरीरलाई फिट राख्ने प्रयास गर्दछु । आफनो शरीर स्वस्थ्य भएमात्र अन्य कुराहरु चाहिन्छ । स्वास्थ्य नै नभएमा जीवनको अर्थ पनि रहँदैन । त्यसैले जति व्यस्त भएपनि म आफनो शरीरलाई स्वस्थ्य राख्न समय निकाल्छु । म क्लबमा जान्न तर घरमा नै योगा र फिटनेशमा संलग्न हुन्छु ।
मेरो दैनिकी बिहान ६ः३० बजेबाट शुरु हुन्छ । उठ्ने बित्तिकै १ लिटरजति कागति र मह मिसाएको पानी पिउँछु । त्यसपछि म फ्रेस हुन्छु । त्यसपछि योगा र एक्सरसाइजमा जान्छु । हरेक दिन एउटा स्याउ खाने गर्छु । मौसमी फलहरु पनि नियमित नै खाने गरिन्छ । म बिहान हेवी ब्रेकफास्ट गर्दिन किनभने हामी १० बजेसम्म खाना खाइसक्छौं । दाइको छोराछोरीहरु स्कुल जाने भएकाले प्रायः बिहान हेवी नास्ता नगरी खाना नै खाने गर्दछौ । समयमै खाना खानुपर्छ भन्ने हुन्छ । मलाई सादा दाल, भात तरकारी नै मन पर्दछ । घरमा जे बनेको हुन्छ त्यही खाने गर्दछु । त्यस पछाडी प्राय फिल्मको सुटिङ र फोटो सुट लगायत कार्यक्रममा व्यस्त रहन्छु । बेलुकी ११ बजे मात्र सुत्ने गर्दछु ।
सुन्दर रहन खाना र एक्सरसाइजले मात्र हुँदैन । हाम्रो विचार पनि स्वस्थ्य रहन जरुरी छ । म हरेक क्रियाकलापमा सकारात्मक सोच राख्ने गर्छु । तर कडा किसिमका व्यायाम गर्दिन । योगाले मलाई आजसम्म फिट रहन सहयोग पु¥याइरहेको छ । विहान डेढ घण्टा योगा टे«डमिल, जगिङका लागि समय छुटयाएकी छु । म एक्सरसाइज घर भित्रै गर्दछु । बाहिर जाँदिन ।
स्वस्थ खानपान र जीवनशैलीले आज मेरो फिगर र फिटनेशमा निखार आएको छ । मलाई आफू फिट भएको कन्फिडेन्ट छ । मेरो करियरमा यसले निकै सहयोग पु¥याएको छ । मेरो तौल हाल ४९ केजी छ, उचाइ ५ फिट ५ इञ्च छ । उमेर २७ बर्ष भएको छ । मेरो उचाइ अनुसार तौल एकदमै ठिक छ । एक्सरसाइज गरेर आफ्नो शारीरिक तौललाइ नियन्त्रणराख्न सफल भइरहेकी छु ।
विहानको खानाः साधारण दालभात तरकारी
दिउँसोको खानाः रोटीे अम्लेट नुडल्स तरकारी
बेलुकीको खानाः सुख्खा रोटी, ढिडो, मकैको भात, उसिनेको मकै (विभिन्न समय र मौसम अनुसार) ।
जोशिला युवा जो हेल्थकेयर म्यानेज्मेन्टलाई व्यवहारमा उतार्दै छन्
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । कहिले पुग्छन् पश्चिम क्षेत्र प्युठान, कहिले अर्घाखाँची त कहिले पूर्वको जनकपुर,
सफल युवा औषधि उद्यमी सन्तोष बरालको १० वर्षको यात्रा
सन्तोष बराल नेपाली औषधि कम्पनि ‘आदी रेमिडिज प्रा.लि.’ का प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ । नेपाल औषधि
बीमा बाहेक अर्को उपाय छैन
प्रा.डा. अर्जुन कार्की ह्याम्स हस्पिटलमा पल्मोनरी तथा क्रिटिकल केयर विभागको पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एण्ड स्लिप